Dadku waxay beddelaan cimilada 170 jeer ka dhaqso badan xoogagga dabiiciga ah | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka Cimilada. Kuwani waa laba eray oo in kasta oo ay cusbaayeen, tixraacaya dhacdooyinka caalamiga ah ee dhacayay tan iyo asal ahaan meeraha dhulka. Si kastaba ha noqotee, waligeed ma dhicin noole saamayn weyn ku yeelan kara adduunka sida aadamuhu u leeyahay oo kale.
Waxaan nahay jinsi caqli badan. Waxaan ku guuleysanay inaan gumeysano dhamaan qeybaha aduunka, hadana waxaan ku soconaa 10 bilyan. Laakiin qiimaha maxaa? Qaarkood waxay aaminsan yihiin in isku dheelitirnaantii dabiiciga ahayd la jebiyey oo aan qarka u saaran nahay inaan galno waayi cusub oo joqoraafi ah: Holocene. Sida laga soo xigtay daraasad, cimilada ayaa isbeddelaysa 170 jeer dhaqso badan sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa aadanaha marka loo eego xoogagga dabiiciga ah. Cawaaqib noocee ah ayey tan yeelan kartaa? Lama oga.
Daraasadda, oo ka socota Jaamacadda Qaranka ee Australia (ANU) oo lagu daabacay Dib-u-eegista Antropocene, wuxuu baaraa Dhulka inuu yahay nidaam kakan wuxuuna qiimeeyaa saameynta aadanaha uu ku leeyahay raadkeeda. Sidaa darteed, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay ogaadaan taas Qiiqa gaaska lagu sii daayo ee ay dadku sii daayaan 45-kii sano ee la soo dhaafay ayaa kordhiyay heerka kororka illaa 1,7ºC qarnigiiba.
In kasta oo taasi macnaheedu ahayn in xoogagga dabiiciga ahi ayan waxba soo kordhinayn. Professor Will Steffen ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi "marka la eego saameyntooda muddadaas yar, hadda way dayacan yihiin marka loo eego saameyntayada".
Ma waxbaa la qaban karaa si looga hortago in xaaladdu ka sii darto? Sida laga soo xigtay Steffen, haa: sharad ku saabsan eber qiiqa wasakhda. Laakiin waqtigu si dhakhso ah ayuu u socdaa. Marka la gaaro 2050, tirada dadka ayaa la filayaa inay gaarto sagaal bilyan. Dad badan ayaa macnaheedu yahay dalab dheeraad ah oo loogu talagalay ilaha, taas oo si lama huraan ah u yeelan doonta xitaa saameyn aad u daran meeraha, illaa aan qaab nololeedkeena wax laga beddelo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Dadku waxay beddelaan cimilada 170 jeer ka dhakhso badan kuwa dabiiciga ah
Waxaan galeynaa marxalad cusub oo cilmiga dhulka ah: Anthropocene